कादरीलाई पाउनको लागी सुनिल सेट्टीले ९ वर्ष संघर्ष गरेका थिए ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > कादरीलाई पाउनको लागी सुनिल सेट्टीले ९ वर्ष संघर्ष गरेका थिए !
कादरीलाई पाउनको लागी सुनिल सेट्टीले ९ वर्ष संघर्ष गरेका थिए !
August 11, 2018 Bollywood
बलिउड अभिनेता सुनिल सेट्टी ५७ वर्षको भएका छन् । १९६१ अगस्ट ११ तारीखमा सेट्टी दक्षीण भारतको कर्नाटकमा जन्मिएका थिए ।
बलिउडमा धेरै हिट फिल्म दिईसकेका सेट्टीको प्रेम कहानी भने केही अचम्मको छ । हिन्दु परिवारमा जन्मिएका सुनिल मुस्लीम परिवारको छोरी माना कादरी सँग प्रेम गर्दथे । सुनिलले कादरीलाई फकाउनको लागी सबै भन्दा पहिले कादरीको बहिनी सँग मित्रता गाँसेका थिए ।
सुनिल र कादरी बिचको पहिलो चिनजान पनि कारदीको बहिनीले नै गराएकी थिईन् । परिचय भएको केही दिन मै सुनिलले कादरीलाई प्रेम प्रस्ताप राखेका थिए । सुनिलको प्रस्तापलाई कादरीले स्विकार गरे पनि यि दुई बिचको बिवाह भने निकै मुस्किलमा थियो । किन कि यि दुबै अलग अलग धर्म समुदायका थिए ।
आफ्नो प्रेमलाई सफल बनाउन सुनिल र कादरीले ९ वर्ष सम्म आ आफ्नो परिवार सँग संघर्ष गरे पछि अन्ततः सुनिल र कादरीको १९९१मा बिवाह भएको थियो ।
१९९१ म बैवाहीक बन्धनमा बाँधीएका सुनिल र कादरीको २ सन्तान भएका छन् । सुनिलको जेठी छोरी अथियाले चलचित्र हिरो बाट बलिउडमा कदम राखी सकेकी छिन्, भने छोरो अहान डेब्युको तयारीमा रहेका छन् । सुनिलले १९९२ मा निर्माण भएको चलचित्र बलवान बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए ।